२२ रुपैयाँमा छानी-छानी ग’र्लफ्रेण्ड ! – Online Khabar 24
२२ रुपैयाँमा छानी-छानी ग’र्लफ्रेण्ड !
सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ घटना हो– छिमेकी मुलुक चीनको ।
जहाँ एक सपिङ्ग मलले ग्रा’हकहरुलाई भाडामा ग्रर्लफ्रेण्ड उप’लब्ध गराइदिन्छ । यदि तपाईँले एउटा सर्त मान्नु भयो भने ती केटीहरुसँग २० मिनेट समय बिताउन सकिन्छ ।
२२ रुपैया अर्थात ११ फिलिपिनो पिसोमा पाइने ती यु’वतीहहरुसँग तपाईले मज्जाले समय बिताउन सक्नुहुन्छ ।
उनीहरु मध्यबाट ग्रा’हकले आफूलाई मनपरेकी युवतीसँग समय बिताउँन सक्छन् । उनीहरुलाई भाडामा लिएर २० मिनेट मज्जाले डेटिङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ । यो अवधिमा सपिङ्ग, डिनर, कफी, गफगाफ गर्न सकिन्छ तर ती यु’वतीलाई छुन भने पाइदैन। एजेन्सी यो खबर सामाजिक सञ्जालबाटसाभार गरियको हो ।
Prevमहिलाहरु पुरुषलाई आफ्ना यी ५ कुरा कहिल्यै बताउँदैनन् !
nextके जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ?